Saturday November 01, 2014 - 12:29:57 in Wararka by Super Admin
Burkina Faso waxay kamid noqotay wadamada mustacmaradaha usoo noqday gumeystaha faransiiska balse sanaddii 1960 ayay ka xuroowday Faransiiska.
Wadanku wuxuu kamid yahay wadamada caalamka islaamka intabadan dadka ku dhaqan Burkina Faso waa dad muslimiin ah waloow ay jiraan dad aan badnayn oo diinta nasaarada heysta islamarkaana awood ku dhax leh maamulka iyo melleteriga.
Fooltada sare waxay xuduudo laleedahay illaa iyo 6 dowladood oo afrikaan ah waxayna dowladahaasi kala yihiin Maali,Ayfarikoost,Nayjar,toogo,baniin iyo gaana.
Wadankan oo lagu tiriyo wadamada ugu faqrisan qaarada afrika balse leh kheyraad waxaa soo xukumayay kaligii-taliyayaal xukunka ku raagay dadkoodana u horseeday dib udhac dhan walba ah.
Xukuumadda dabadhilifka ah ee kajirta Burkina Faso ayaa xariir dhanka ladagaalanka waxa loogu yeero argagaxisada laleh dowladaha reer galbeedka gaar ahaan mareykanka iyo faransiiska.
Sanaddii 2012-ka ayay Burkina Faso si toos ah uga qeyb qaadatay duullaan gaaleedka lagu qaaday wadanka maali iyadoona ciidankoodu ay mujaahidiinta kula dagaalameen waqooyiga maali gaar ahaan magaalada Keydaal oo meel aan ka fogayn ay xadbeenaadka kula wadaagto wadankaasi Maali.
Xukuumadda Burkina Faso ayaa lagu sheegaa xukuumad laga maamul magaalada Paris ee wadanka Faransiis sababa laxariira gumeystayaasheedi hore oo ku adeegta ciidanka melleteriga wadankaasi.
inkabadan 100 askari ayaa Burkina faso looga dilay dagaallo fool ka fool ah iyo camaliyaad istish-haadi ah oo mujaahidiintu ay kula galeen waqooyiga Maali.
Madaxweynaha wadankaasi ayaa markii ugu horreysay arbacadii lasoo dhaafay kacdoon shacabi ah kala kulmay shacabka wadankaasi kadib ku dhawaad 30 sanadood oo uu dhiigooda miiranayay.
Wararka ka imaanaya magaalada Wagadugu ee caasimadda u ah wadanka ayaa sheegaya in boqolaal kun shacab caraysan ah ay khamiistii lasoo dhaafay xoog ku galeen dhismayaasha xukuumadda waxayna dalabanayeen in uu iscasilo madaxweynaha.
Rasaas ay ciidanka ilaalada madaxtooyada fureen waxaa ku dhintay sedax qof taasi oo sababtay in xaaladdu faraha ka baxdo,melleteriga ayaa iclaamiyay in lakala diray xukuumadda iyo golaha baarlamaanka iyagoona si KMG ah xaalad degdeg ah ugusoo rogay magaalada caasimadda ah iyo gobolada dalka.
Balees Kiimbaawri madaxweyinii wadankaasi oo talada inqilaab melleteri ku qabsaday sanaddii 1987 ayaa shaqada laga eryay kadib markii isku dayay in uu been usheego didbaxayaasha,Kiimbaawri wuxuu isku dayay in uu dastuurka daaquudka waxkabedelo si uu markale doorashooyinka isugusoo sharaxo kadibna uu madaxweyne usii ahaado.
Hoggaamiyahan kaligii taliyaha ah ayaa gelinkii dambe ee jumcaha ku dhawaaqay in uu u hoggaansamay awaamirta melleteriga ee ah in uu xilka ka dego kadibna uu xukuumad KMG ah xilka ku wareejiyo.
Kooxo hubeysan ayaa rasaas ladhacay xarunta xisbiga talada haya,xarunta baarlamaanka iyo bankiga magaalada waxaana magaalada caasimadda ah laga dareemayay xaalad fowdo ah.